Etu esi eji Twitter | Martech Zone
Tupu ịkwa emo na Infographic a, naanị taa mụ na onye ahịa rụkọtara ọrụ chọrọ usoro iji rụọ ọrụ na Twitter. Echere m na infographic a na-enye ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ maka ndị folks na ụfọdụ ndụmọdụ dị mma na ya niile. Maka azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa (B2B), ana m akwado atụmatụ abụọ maka ndị ahịa m:
Nke mbu, ana m akwado ka ha soro ndị isi na Twitter na ụlọ ọrụ ha, malite mkparịta ụka ha na ha, kwalite tweets ha mgbe ohere dapụtara, ma wulite mmekọrịta gị na ha n'ịntanetị. Ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike ịbanye na Twitter wee nweta ndị na-eso ụzọ zuru oke iji nweta uru ozugbo n'iji ya. Maka ndị ọzọ, anyị kwesịrị ka ndị ọgbọ anyị nabata anyị ma mee ka anyị mata na netwọkụ nke ndị ọgbọ. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eso 29k, ọ bụ ya mere m ji anwa ị paya ntị na ịkwalite ndị ọzọ! Otu onye mere ya mgbe m nwere naanị ole na ole!
Nke abuo, ana m akwado ka ha soro atụmanya ha. Ka ị na-etolite atụmanya gị na Twitter, a ga-enwekwu ohere isoro gị. Never maghị mgbe olile anya ga-achọ enyemaka gị na Twitter… nọrọ ebe ahụ mgbe ha na-arịọ!
Ekele dịrị ndị mmadụ na Twiends maka nnukwu infographic!